လူသားအားလုံးအတွက်: ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးခေါင်းလောင်း ဘယ်ခေါင်းလောင်းလဲ ....
Posted by မိုးယံ at 10:43 PM Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to FacebookShare to Pinterest
ဓမ္မစေတီခေါင်းလောင်းကြီးကို ရေတပ်အရာရှိဟောင်း တစ်ဦး ဦးစီးပြီး ပြန်ဆယ်မယ် လို့ကြားလိုက် တာ မကြာသေးဘူးဗျ...
ဘာဆက်ဖြစ်လဲ တော့ မသိရသေး...
မြန်မာပြည်မှာ ရှေးကျတဲ့ အရာတွေ အားကြီးပါပဲဗျာ..
ဓမ္မစေတီခေါင်းလောင်းအကြောင်းမလှပုံ တွေဟာ ပုံပြင်ဆန်ဆန်တွေ ဆက်ဖြစ်နေတယ် ဆယ်ဖို့ ကျိုးစားကြတယ်
အဲဒါတွေ ရေးပြပေးရင် အရမ်းစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းမယ်
Please check out this article at Myanmar Wikipedia.
ZT ကိုကျေးဇူးတင်သဗျို့ အဲဒီမှာ ပိုပြည့်စုံတယ် ဖတ်ကြည်လိုက်ဦးမယ်။ အရင်တုန်းကတော့ ဘုန်းကြီးတရားထဲမှာ နာဖူးတယ်။
ကျွန်တော်တော့ ဒီနေ့ ဗဟုနှင့်သုတ တိုးသွားပီ. သိုင်းကျူး ...
ဓမ္မစေတီမင်း ခေါင်းလောင်း ပြန်ဖော်ရင်း
ကြုံရတဲ့ ဆန်းကျယ်ဖြစ်ရပ်တွေ ဖတ်ဖူးတယ်။
ှရှာဖွေလို့ လက်လှမ်းမှီရင် ပို့စ်အဖြစ်
ဓမ္မစေတီ ခေါင်းလောင်းကို ဆယ်ဖို့ ဆိုတာ မလွယ်သေးပါဘူး။
သူ့ရဲ့ အလိုရှိရာ ပစ္စည်းတွေ ပြည့်စုံမှ ဖြစ်လာမှာပါ။
ကြားဖူးတယ်...နာမည်ကြီးစာရေးဆရာတစ်ယောက်ကိုဒီခေါင်းလောင်းကိုမဖော်ဖို့ အိပ်မက်ပေးတာကိုလက်မခံလို့ လူတွေအများကြီးရှိတဲ့ထဲကနေခွေးတစ်ကောင်ကိုရွေးကိုက်သွားတယ်ဆိုပဲ...တကယ်နော်...နောက်တာဟုတ်ဘူး
ဓမ္မစေတီခေါင်းလောင်းကို အရင်က ကော့သောင်းက သူဌေးတစ်ယောက်ဆယ်ခဲ့ဖူးပါတယ်.. အကြိမ်ပေါင်းဆိုရင် သုံးကြိမ်တောင်ရှိခဲ့ပါတယ်..
ပထမအကြိမ်.. သူတို့ ဘိုးတော်တွေ၊ နတ်ဆရာလိုလို ဟာတွေနဲ့ဆယ်ပါတယ်.. မအောင်မြင်ပါဘူး.. ဒုတိယတစ်ကြိမ် တစ်ခြားနိုင်ငံက နည်းပညာ ကျွမ်းကျင်သူတွေနဲ့လည်း ဆယ်ပါတယ်.. အဲဒီမှာလည်း မအောင်မြင်ပါဘူး.. ခေါင်းလောင်းက တစ်စောင်း အဖြစ်မြစ်ထဲ မြုပ်နေပြီး.. တစ်ပိုင်းက နွံ့ထဲရောက်နေပြီလို့တော့ သိခဲ့ရတယ်ပြောပါတယ်.. သူတို့ နောက်ဆုံးအကြိမ် အရင် ဘိုးတောင်တွေ ဘာတွေနဲ့ပဲ ထပ်ဆယ်ကြပါတယ်.. အဲဒီမှာ နောက်ထပ်လာဆယ်ရင် လှေတွေ သင်္ဘောတွေကိုပါ နှစ်ပစ်မယ်လို့ ခေါင်းလောင်း အစောင့်အကြပ်တွေက ပြောတယ်ဆိုပါတယ်.. ဒီသူဌေးက နောက်ထပ်လည်း မဆယ်တော့ပါဘူး.. သုံးကြိမ်ဆယ်ဆာ မအောင်မြင်လိုက်လို့ သူမှာခုလည်း တစ်ပြားမှမရှိလောက်အောင်တောင် ဖြစ်သွားရပါတယ်..
ခုတော့ ထိုဓမ္မစေတီခေါင်းလောင်းဟာ ရန်ကုန်မြစ်ဝမှာပဲရှိနေဆဲလို့ဆိုပါတယ်..